Lutho neze, bese bethola umntwana, abadala baba odokotela nesithakazelo lapho izingane ziqala ukugcina ikhanda lakhe.
Silindele kuze kube izinyanga 3
Akumangalisi, ngoba impumelelo eziyisisekelo lezo kuyofinyelela ingane phakathi nalesi sikhathi, kuyoba kuqala. Futhi kuyoba yinto ubufakazi ebalulekile ukuthi ukuthuthukiswa ngokomzimba of ingane ngendlela efanele, futhi ngokushesha uyokuzwa ukuthi unikezele owakho.
Ngakho lapho izinsana ziqala ukugcina ikhanda lakhe? Odokotela bezingane musa igama nesikhathi esiqondile, ngoba ubunjalo ekuthuthukiseni ngakunye lemfundzi ngamunye. Yiqiniso, zikhona imithetho ethile ezidinga guided ingane kancane ngemuva noma kancane ngokushesha, akudingekile sokwethuka.
Kukholakala ukuthi ingane esanda kuzalwa kunesithembiso ikhanda lakhe kahle izinyanga 3, no-4 ukwenza lokhu eqiniseka ngempela. Kwaphela izinyanga ezingu-2 ukuthi ingane ikwazi kuphela ukuzama ukulawula ikhanda lakhe, kodwa mancane kakhulu amathuba okuthi lokho ngaphandle phefu. By the way, odokotela bathi izingane zanamuhla sebeqala ubambe ikhanda kuneNingizimu izingane eminyakeni 80 - amaningi amasonto 9 kakade ngokuqiniseka uliphathe.
omama abaningi futhi obaba ngabomvu lapho pipsqueak yingcweti leli khono, iningi ufuna ukubona ingane sokugcwaliseka kwaso kontanga. Futhi engazi malini nosana ubambe ikhanda lakhe, uyajabula lapho bayayenza kakade ngenyanga ngaphambili.
Futhi benza it ngaphumeleli ngoba kulesi simo kufanele ngokushesha kudokotela. Phela uma izingane ziqala ukuthi uyaliphakamisa ikhanda lakhe esemncane ezinjalo, okusho ukuthi banayo hypertonicity noma ophezulu intracranial. Kid kungenzeka i-signal ngalezi zinkinga ngokuvamile bakhala yokuthi cishe akukho ubuthongo.
Uma ingane engayekanga ikhanda lakhe futhi izinyanga 3, kungcono futhi wazise udokotela wakho. Mhlawumbe umntwana aphansi kakhulu imisipha ithoni, noma uma kukhona izinkinga zezinzwa. Esemncane enjalo basuke ixazululwe kulula kunokuthi ngemva konyaka. Mhlawumbe ingane yakho kuzokusiza massage Yiqiniso noma amavithamini ukuthi udokotela ekunika. Into esemqoka - musa ukuqala inqubo. Sicela uqaphele ukuthi uma ingane kunesithembiso ikhanda zakhe ziqonde. Uma kungenjalo, khuluma wabantwana - mhlawumbe torticollis umntwana, okufanele lolu daba.
Lapho izingane uqale ukugcina ikhanda lakho, baze bangabe besaba abadinga zibhekise, lapho ukusekela ikhanda nakanjani. Uma ingane yakho iye hhayi wafunda ukulawula umzimba wakhe omncane, baqhubeke besiza kuye, kungenjalo kukhona ingozi yokulimala ukuba umlomo wesibeletho.
Uma ufuna ukusiza ingane yakho ekuzuzeni leli khono ebalulekile, uqala ukuthuthukisa Imisipha yentamo yakhe. Ngokuvamile wamlalisaphi umntwana esiswini sakhe (nje ukulinda kuze kube umzuzu lapho ekugcineni zaphela isilonda enkabeni), nakuba ekuqaleni nguye kulesi sikhundla imizuzwana engu-30.
Kancane kancane ukwandisa isikhathi - uzophawula indlela pipsqueak uzama ukuthi siphakamise ikhanda, sengathi ukuyivula emaceleni. Lena yindlela reflex wamupha kusukela ekuzalweni kuze ingane ubophekile ngenkathi kulesi sikhundla. Lapho ingane iphendula ngenyanga, iningi bawuthwale sesimweni oqotho, ukuze wafunda ukugcina ikhanda ezingeni ne Taurus, kodwa bayaqhubeka uyibambe.
Fairy izinyoni - a okukhulu indaba ephathwayo for usuku sifundo
Ibhayisikili izingane ene-cerebral palsy: izici, izinhlobo, izici